२ महिनामा बाबुले छोडेपछि गिटि कुटेर पालिन आमाले । गित गाएरै आमालाई पाल्ने यस्तो सपना ~ सक्दो सेयर गर्नुहोला !!::आर एम खबर
२ महिनामा बाबुले छोडेपछि गिटि कुटेर पालिन आमाले । गित गाएरै आमालाई पाल्ने यस्तो सपना ~ सक्दो सेयर गर्नुहोला !!
२ महिनामा बाबुले छोडेपछि गिटि कुटेर पालिन आमाले । गित गाएरै आमालाई पाल्ने यस्तो सपना ~ सक्दो सेयर गर्नुहोला !! भिडियो अन्तेममा छ
यो पनि पढ्नुहोस् :मोरङमा इजरायल पठाइदिने भन्दै ठगिए १४ युवा युवती!जनहितको लागि सक्दो सेयर गरिदिनुहोला!!!
मोरङको लेटाङ नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय कूलबहादुर लिम्बूको काठमाडौं बस्छन् । टोखा नगरपालिका–८ मा गाई पालन तथा सुब्बा अर्गानिक तरकारी फार्म छ । फार्म सञ्चालक लिम्बूको धन्दा भने विचित्रको रहेको पाइयो । बाहिर देखाउँदा आफू एउटा महान कृषक भन्ने देखाउने उनको भित्री धन्दा भने धेरैलाई आश्चर्यचकिन पार्ने खालको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित मुलुक इजरायल पठाइदिने भन्दै उनले लेटाङकै १४ युवा युवतीसँग लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । कामदार पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको मुलुक हो इजरायल । ठगीमा उनीसँगै सिन्धुपाल्चोकका ज्ञानबहादुर तामाङ पनि संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका अनुसार कूलबहादुरको ठगीमा आफन्त र छिमेकीहरु परेका छन् । सबैसँग गरेर १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि भएको कार्यालयका प्रमुख एवं बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए । उनले १४ जनासँग प्रति व्यक्ति १ लाखदेखि २ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म ठगी गरेको बताए । तीन वर्षदेखिको ठगीमा पर्नेमा उनका भतिजा, भान्जादेखि छिमेकीसम्म छन् ।